खुशीकाे खबर : इजरायलमा महिनाको २ लाख कमाइ हुने, श्रमिकले भिसा शुल्क समेत तिर्नु नपर्ने! – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /समाचार/खुशीकाे खबर : इजरायलमा महिनाको २ लाख कमाइ हुने, श्रमिकले भिसा शुल्क समेत तिर्नु नपर्ने!
त्यतिबेलाको योजना सफल नभएपछि सरकारले इजरायलसँग श्रम सम्झौता नै गरेर श्रमिक पठाउन लागेको हो। त्यसअघि म्यानपावर कम्पनीले समेत इजरायलमा नेपाली श्रमिक पठाउँदै आएका थिए। श्रमिकसँग चर्को शुल्क लिएको पाइएपछि सन् २००९ देखि म्यानपावर कम्पनीलाई श्रमिक पठाउन रोक लगाइएको थियो। इजरायलमा करिब तीन हजार नेपाली केयरगिभरका रूपमा कार्यरत रहेको विभागको अनुमान छ। याे खबर नेपाल खबरले छापेकाे छ ।